အဆိုပါ Umbrella အကယ်ဒမီရာသီ3ဖြန့်ချိသည့်နေ့စွဲ, သွန်း, နောက်တွဲယာဉ်နှင့်ပိုပြီး - အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ
အဆိုပါ Umbrella အကယ်ဒမီရာသီ3ဖြန့်ချိသည့်နေ့စွဲ, သွန်း, နောက်တွဲယာဉ်, အနှစ်ချုပ်နှင့်ပိုပြီး
UMBRELLA အကယ်ဒမီ (L မှ R သို့) ရောဘတ်ရှိတ်ခ်ျကို KLAUS HARGREEVES, JUSTIN H. MIN အဖြစ် BEN HARGREEVES၊ AIDAN GALLAGHER NUMBER FIVE အဖြစ်၊ ELLEN PAGE VANYA HARGREEVES ကဲ့သို့ TOM HOPPER၊ LUTHER HARGIDVES ကဲ့သို့ပင်၊ UMBRELLA အကယ်ဒမီ Cr ၏ဇာတ်လမ်းတွဲ 201 တွင် Allison Harregree အဖြစ် RAVER-LAMPMAN ။ ခရစ္စတိုဖာ KALOHORIDIS / NETFLIX © 2020
Bansland ရာသီ ၂ တွင်အဲလစ်အတွက်ပရိသတ်များအဖြေမရသောမေးခွန်း ၅ ခု Bridgerton ၏Regé-Jean Page သည်သူတွဲဖက်ကြယ်ပွင့်ဖီဒီနီဗိုနှင့်ချိန်းတွေ့သည်ဟုကောလာဟလများကိုအလေးထားသည်
Netflix တွင် Umbrella အကယ်ဒမီရာသီ ၃ ရက်ကိုဖြန့်ချိမည့်နေ့
ကျနော်တို့မြင်သည်အထိအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ် အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ Netflix အပေါ်ရာသီ3။ ဒီပြပွဲရိုက်ကူးဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာနှင့် post- ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤ Netflix ၏ပထမဆုံးရာသီ ၂ ရာသီအကြားကွာဟမှုသည် ၁၈ လခန့်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယနှင့်တတိယရာသီအကြားအလားတူအချိန်ဇယားကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ရသည်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာရင်ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ် အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ 2022 ၏အစအ ဦး မှာရာသီ3။
ကနေအစီရင်ခံစာအရ ပြီးစီးရမည့်နောက်ဆုံးအချိန် , အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ Season3သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်စတင်ထုတ်လုပ်ဖွယ်ရှိသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတော့မည်ဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ၏လမ်းပိုမိုရှိပါတယ် အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ ရာသီ (၃) ရာသီရေးသားခြင်း၊ ရိုက်ကူးခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ရာသီသစ်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းတို့၏ပုံမှန်အတားအဆီးများထက်ရာသီဥတုအခြေအနေ ၃ ။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါသည်တီဗွီနှင့်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်ရပ်တန့်နေသည်။
ကိုယ့်ဗဟို၏ရာသီ9ဘယ်မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
ထုတ်လုပ်မှုရပ်တန့်ခြင်းကြောင့်ပြပွဲများနှင့်ရုပ်ရှင်အားလုံးနီးပါးနှောင့်နှေးနေသည်။ ရာသီပြီးသား (ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်) ရေးသားခဲ့သည်ရင်တောင်သူတို့ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်အမျိုးမျိုးသောသမဂ္ဂများကအတည်ပြုသည်အထိသူတို့ပြန်ရိုက်ကူးဖို့မတတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်းအနည်းငယ်ကြာကြာကြည့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ခန့်မှန်းတာပါ အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ Netflix အပေါ်ရာသီ3။ ငါတို့ကံကောင်းရင် 2022 နွေရာသီမှာရာသီသစ်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းပိုမိုသိစေရန်ပါလိမ့်မယ် အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ ကျနော်တို့ထွက်ရှာတွေ့သည့်အခါရာသီ3လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ။
အဆိုပါ Umbrella အကယ်ဒမီရာသီ3သွန်း
အပြည့်အဝသွန်း အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ ရာသီ ၂ သည်ရာသီ ၃ အတွက် Elliot Page၊ Justin H. Min၊ Robert Sheehan၊ Emmy Raver-Lampman၊ David Castañeda၊
အစီရင်ခံစာအရ Ritu Arya နှင့် Colm Feore တို့သည်ရာသီ (၃) တွင်ပြန်လာမည်ဖြစ်သည်။
ထိုပြန်လာပြီးနောက်မည်သူသိသနည်း။ ရာသီသစ်မှာဒီစီးရီးမှာပါ ၀ င်မယ့်သူကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ပြပွဲရှိအခြားဇာတ်ကောင်များကိုတွေ့ရန်အချိန်တန်လျှင်ပြန်သွားနိုင်သည်။
Netflix ကရုံတင်သည့်အဖွဲ့ဝင်အသစ်များသည် Umbrella အကယ်ဒမီရာသီ ၃ တွင်ပါဝင်ခြင်း၊ Justin Cornwell၊ Justin H. Min (ဇာတ်ကောင်အသစ်ကစားခြင်း)၊ Britne Oldford၊ Jake Epstein၊ Genesis Rodriguez, Cazzie David နှင့် Existential Dread Inducing တို့ပါဝင်သည်။ Psykronium Cube ။
အသစ်သရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ Sparrow အကယ်ဒမီတက်ပါစေ။ Tweet၊
စာငှက်များသည်ရာသီဥတုအခြေအနေ (၃) တွင်လာသည် https://t.co/lbWMQvnQet pic.twitter.com/GqePLzRCYt
- Netflix (@netflix) 2021 ဇန်နဝါရီလ 11,
အဆိုပါ Umbrella အကယ်ဒမီရာသီ3နောက်တွဲယာဉ်
Netflix သည်နောက်တွဲယာဉ်ကိုမျှဝေခြင်းမရှိပါ အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ ရာသီ3သေး! ရာသီသစ်အတွက်နောက်တွဲယာဉ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမင်းတို့ကိုမင်းကိုအသိပေးမှာပါ။
အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီရာသီ3တရားဝင်ဖြစ်ပျက်နေသည်! pic.twitter.com/Vg7jXrXwnV
- Netflix (@netflix) နိုဝင်ဘာ 10, 2020
အဆိုပါ Umbrella အကယ်ဒမီရာသီ3အနှစ်ချုပ်
ငါတို့အတွက်အနှစ်ချုပ်မရှိပါ အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ ရာသီ ၃။ ပရိသတ်များသည်ရာသီကိုကြည့်ပြီးသည့်နောက်၊ ထိုရာသီဥတု ၁ ပြီးနောက်ဖြစ်သကဲ့သို့ဤသူရဲကောင်းများအတွက်လမ်းညွှန်သည်တော်တော်လေးရှင်းလင်းသင့်သည်။
နယ်စပ်ရာသီ2Netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
ငါတို့သိသမျှအားလုံးပါပဲ အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ ရာသီ3ယခုအချိန်အထိ! ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိရန်သင့်အားအကြောင်းကြားပါမည်။
နဂါးရုပ်ရှင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ usa ခေါ်ဆို